Indlela yokufunda nokuthumela imiyalezo - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ukuthumelelana imilayezo – isihloko sosizo
Ukufaka imiyalezo ku-akhayivu
Iya kokuthi Inbox bese ukhetha imiyalezo ofuna ukuyifaka ku-akhayivu
Chofoza uphawu oluthi I-akhayivu
Ukuze ufunde imiyalezo efakwe ku-akhayivu, khetha okuthi Izingxoxo eziku-akhayivu kumenyu eyehlayo
Ukuze ufake umyalezo ku-akhayivu, kuzodingeka ungene ku-Inbox kukhompyutha yedeskithophu. Isici se-akhayivu asitholakali kuwebhu yemobhayili noma ku-app ye-Airbnb.
Swayipha umyalezo ukuze ubonise ongakukhetha, bese uthepha okuthi I-akhayivu
Ukuze ufunde imiyalezo efakwe ku-akhayivu, iya kumenyu yakho ye-Inbox bese uthepha okuthi I-akhayivu
Uma unguMbungazi, thola okwengeziwe ngendlela yokumenenja imiyalezo yezivakashi zakho.
Uma kukhona okungahambi kahle ekungeneni
Siyaqonda. Kuyacasula uma ubhukhe indawo bese uthola kunokuthile okungekho, okungasebenzi, noma ufice kungekhona lokho obukulindele uma unge…